Home » အသားပေး » ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ရှိထားသည်-ခဲ့ 2019
ကျွန်တော်ဆောင်းပါး၏အသားထဲသို့ရမီ, ငါအောက်ပါမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုသက်တမ်းထပ်တိုးချင်တယ်။ အဲဒါကို 'တယောက်ရဲ့ junk အခြားလူသားရဲ့ဘဏ္ဍာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ' 'ဟုဆိုသည်ထားပြီး ဒါဟာခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ဘုံတွင်လည်းမှန်သည်။ One ရဲ့လမ်းကြောင်းကအမှန်တကယ် ''-ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ '' အခြားရဲ့ဖြစ်နိုင်သည် ငါသည်ငါ့မျက်စိဖမ်းမိငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်ပြီအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုဖော်ပြထားခြင်းနေချိန်မှာဒါ, သငျသညျသူတို့ကိုငွီးငှေ့ဖှယျအဟောင်း-ဦးထုပ်ကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါစိတ်ကိုထား။ သို့သော်ထိုကောင်းမွန်သောဇာတ်လမ်းပြောပြရန်အလှည့်ကွက်သည်။ ထိုအခါ 2019 NAB ပြရန် အားလုံးဇာတ်လမ်းပြောပြအကြောင်းပါ။
သူကပြောပါတယ်နှင့်အတူ, ရဲ့လာမည့် 2019 များအတွက်စာမေးပွဲထိုက်ကြောင်းအနည်းငယ်ဒေသများမှာကြည့်ရှုကြကုန်အံ့ NAB ပြရန်။ သူတို့အဲဒီမှာဆိုသညျကားအဖြစ်: "ကျွန်တော်ပုံပြင်ဤတွင်စတင်။ "
အရာတစျခုမှာကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များ 5G ဖို့ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 2019 NAB ပြရန်'' s ကို "ကံကြမ္မာ 5G" ကျိန်းသေမြို့ဟောပြောချက်ပါလိမ့်မည် (ခြင်းဖြစ်သည် NAB မြို့,!) ဒီအဓိကအားဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံပေါ်စေခြင်းငှါနေစဉ်, ဒါကြောင့်လည်းပိုမြန်ဘရော့ဘန်းလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်သောအတွေ့အကြုံများကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖြစ်နိုင်သောရဲ့အဘယ်အရာကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ တဦးတည်းအဘို့, ဆိုရှယ်မီဒီယာတိုးကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာန်းကျင်ဆုံလည်ဖြစ်ပါတယ်။
စားသုံးသူနည်းပညာ Association ကဖော်ပြထားသလို, 5G ကွန်ယက် 100 ကြိမ် 4G များ၏စွမ်းရည်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုငါပေးမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့နှစ်နာရီရုပ်ရှင်အဘို့, 3G, 26 နာရီကြာ; 4G အကြောင်းကို6မိနစ်ကြာ; နှင့် 5G3အကြောင်းကိုယူပါလိမ့်မယ်½စက္ကန့်။ 3G မာရီယို Bokatius, NXP မှာအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနှုန်းမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 384 Gbps မှာမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်4Kbps, 100G5Mbps ထိနှင့် 10G လည်ပတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်စိတ်လှုပ်ရှားရနှင့်သင်၏လက်ရှိ 4G စမတ်ဖုန်းအမှိုက်မီ, 5G ကွန်ယက်ကိုအနည်းဆုံး, 2025, သည်အထိကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်မပေးပါ။ ကောင်းပြီ, အားလုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကိုကျော်။
အကြောင်းကို 5Gbps မှာအမြန်နှုန်းနှင့်အတူအကြောင်းကို 1Gbps မှာဒေတာတွေကိုအမြန်နှုန်းနှင့် Hight-Band ရောင်စဉ်ဒါမှမဟုတ် mmWave နှင့်အတူအနိမျ့-တီးဝိုင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းကို 100Mbps မှာဒေတာတွေကိုအမြန်နှုန်းနှင့်အတူခွဲ 1GHz ရောင်စဉ်, ထိုအလယ်အလတ် Band: 10G သုံးခုကိုအဓိက Spectrum အပေါ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဤသုံးပါးတို့အကြားအဓိကအတားအဆီးမှတ်တစ်ခုမှာထိုးဖောက်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်အနိမ့်ကိုအကောင်းဆုံးရှိပါတယ်, နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်သာမန်များနှင့်အလွန်နိမ့်ထိုးဖောက်မှုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်မြင့်မားပါတယ်။
အစောပိုင်း 2017 FCC သည် Spectrum လေလံအမေရိကန်နှင့် Puerto Rico ၏ 45% ကိုဖုံးအုပ်ထား, ထို 600 MHz အကွာအဝေးတွင်ရောင်းချအားလုံးနိမ့်တီးဝိုင်းရောင်စဉ်၏ကို T-Mobile ကအနိုင်ရရှိ 100% ကိုမြင်တော်မူ၏။ T-Mobile ၏အဆိုအရ, အနိမ့်တီးဝိုင်း spectrum ကိုသိသိသာသာ In-အဆောက်အဦလွှမ်းခြုံတိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့်လည်းနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်တီးဝိုင်းနဲ့ high-တီးဝိုင်းရောင်စဉ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အကွာအဝေးသွားရောက်ကာ။ Verizon ကနှင့် AT & T က high-တီးဝိုင်းပ္ပံအပေါ်အာရုံစိုက်နေစဉ် Sprint အလယ်ပိုင်းတီးဝိုင်းရောင်စဉ်၏အများစုရှိပါတယ်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက T-Mobile, က New York မှာယင်း၏ 5G network ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည် Los Angeles မြို့အစောပိုင်း 2019 အတွက်, Dallas မြို့နှင့် Las Vegas မှာ - ပဲ 2019 များအတွက်အချိန်အတွက် NAB ပြရန်!
အဆိုပါ FCC သည်အဆိုပါ UMFUS အတွက် 32 GHz အမြန်နှုန်း, 42 GHz အမြန်နှုန်းနှင့် 50 GHz အမြန်နှုန်းခညျြအနှော (အထက်မိုက်ခရိုဝေ့ Flexible အသုံးပြုမှုဝန်ဆောင်မှု) တွင် operating အတည်ပြုရန်တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူများသည်ကြိမ်နှုန်းဟာ mmW သို့မဟုတ်ခရိုဝေ့ဖ်နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်လှိုင်းများအကြားတည်ရှိနေပေမယ့်, 30 GHz အမြန်နှုန်းနှင့် 300 GHz အမြန်နှုန်းအကြားတီးဝိုင်းဖြစ်သော "မီလီမီတာလှိုင်းရောင်စဉ်" သို့ entry ကို mark ။
ပိုမိုမြန်ဆန် bandwidth ကိုအမြန်နှုန်းဖို့မြင့်တက်လာရန်နှစ်ပေါင်းရှေ့ဆက်အလျင်စလိုမည်! ဒါကြောင့်နှင့်အတူ, ပိုကောင်းတဲ့ AI အဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်လာသည်။
AI အ (သို့မဟုတ်အတိတ်ကာလဆယ်စုနှစ်ကျောက်ဆောင်အောက်မှာနေထိုင်နေသူတွေအတွက် "Artificial Intelligence"), သူ့ဟာသူအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏လောကဓာတ်ပါရှိသည်။ ဒါကြောင့်လာမယ့်လှိုင်းလုံး-မျက်နှာစာပေါ်သည်နှင့် 2019 မှာအခြားပူလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်အဖြစ် agi လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးသားအပေါင်းတို့, AI အအကြောင်း NAB ပြရန်.
အဆိုပါ agi လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆိုအရ AI အ "(နောက်ဆုံးတွင်ကောင်းစွာလူ့ယေဘုယျထောက်လှမ်းရေးကျော်လွန်ဖြစ်ကောင်းနှင့်) ကိုလူ့စိတ်ကြောင့်မှနှိုင်းယှဉ်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူယေဘုယျ-ရည်ရွယ်ချက်စနစ်များကို။ " အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်စက်တွေကိုတွေ့မြင်နှင့်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နားမလည်ရန်အဘို့အဒါဟာပုံမှန်အားနိုင်စွမ်းဆိုလို, စဉ်းစားတွေးခေါ်များနှင့်အမြင်များအပေါ်မှီခိုရွေးချယ်မှုအပေါ်အခြေချ / ပညာပေးပြင်ဆင်နေနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွေ့ဆုံရာမှအမြတ်, လူတွေနှင့်အတူပုံမှန်ဆွေးနွေးမှုများနှင့် etymological စာပေးစာယူရှိသည်နှင့် imprecise နှင့်စိတ္တဇဖြစ်ကြောင်းအခြေအနေများတွင် "ဗီဇ" ဖန်တီးပါ။
AI အများ၏ရောင်စဉ် Artificial အထွေထွေထောက်လှမ်းရေး (agi) မှချုံ့ရန် AI အဖို့နေကြပါတယ်။ agi ကမဆိုတာဝန်ကျရာကိုင်တွယ်နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အရည်အချင်းများနှင့်လူမျိုး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု (ခေါ် "ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်") နှင့်အတူမည်သည့်ကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်အစိုင်အခဲများနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတူကိုစက်ပေးသည်။ ကျနော်တို့ agi ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ကြောင်းလက်ရှိဘာမှမရှိကြပါဘူး။ သိကျွမ်းခြင်းပညာကိုတိုက်ရိုက် (သို့မဟုတ်နိုင်စွမ်း) ကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုချိတ်ဆက်မနှင့်အတူကျဉ်းမြောင်းတဲ့ AI အ, အခြားအဆုံးအပေါ်, တစ်ဦးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတာဝနျကိုချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ image ကိုအသိအမှတ်ပြုမှု, စကားပြောဆိုမှုနည်းပညာ, ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် analytics, ထောက်ခံချက်အင်ဂျင်နှင့်ပရိုဖိုင်းစနစ်များနှင့် Self-ကားမောင်းယာဉ်များပါဝင်သည်။ ဒါဟာကျနော်တို့သေး agi များ၏အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီကြပြီမဟုတ်ကတည်းကအားလုံးလက်ရှိ AI အပလီကေးရှင်းချုံ့ရန် AI အသွင်းစဉ်းစားသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
AI အအသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, လုံခြုံရေးအတွက်ကြောင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးများကိုလိမ်လည်မှု detect နိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Applications ကိုရှေ့တန်းအပေါ်လည်းဖြစ်ကြသည်။ Siri ကိုစကားပြောနဲ့ပဲတုန့်ပြန်စကားကိုနားထောငျဖို့ Off-the-မြို့ရိုးကိုမေးခွန်းတွေမေးကြိုက်နှစ်သက်ပါဘူးငါဆိုလို, - ဒါဟာဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်အဖြစ်နှင့် chatbots အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
ဘေးဖယ်အခုအချိန်မှာ AI အများ၏ပေုံဖျော်ဖြေရေးတန်ဖိုးကိုကနေ simulated ထောက်လှမ်းရေးများ၏အလွန်မှန်ကန်အသုံးပြုမှုသည်လက်ရှိတွင်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ထံမှသတင်းလွှမ်းခြုံဖို့နဲ့ပင်အီလက်ထရောနစ်ဂိမ်းကစားရန်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်အကြောင်းအရာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ coupled လျက်ရှိသည်။ ဤသည်သိမ်းကျုံးပြောင်းလဲမှုအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဓိကယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာအထူးသဖြင့် AI အနည်းပညာကနေအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းသည်။ The New York Times, ဥပမာ, ဆောင်းပါးတွေရေးကြ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတိုးပွါးကြောင်းတစ်ခု AI အ-based ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုအပိုသုတေသနအတွက်အချိန်ပိုမိုခွင့်ပြု, ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများရှာဖွေတာ, အပိုအသိပညာနှင့်သက်ဆိုင်ရာကိုးကား / ထုတ်ပြန်ချက်များ, က compose ဖို့ကြာအချိန်ကိုလျော့နည်းလာခြင်းဖြစ်သည် နှင့်ဆောင်းပါးများကိုအဘို့အအချက်အလက်များ၏တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကြီးအကျယ်ပမာဏကိုစူးစမ်း။
"နောက်လိုက်မှတ်သား" အရှင်အနာဂတ်ရှာဖွေမှုများကိုများအတွက်စကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုတစ်ခုအရေးပါပုံကိုထည့်သွင်းအဓိကစကားလုံးများသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုများဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် "tagged" တဲ့ function ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခက်ခဲသည့်ကိစ္စတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ AI အသို့မဟုတ်လူသားမြားသညျကနေတဆင့် - ကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ဦး AI အအယ်ဒီတာလူသားတစ်ဦးထက်များသောအားဖြင့်ဝေးပိုပြီးထိရောက်လိမ့်နှင့်ပိုပြီးအများအပြားသော့နှင့်စာပိုဒ်တိုများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ငါ (Katharine Hepburn နေဖြင့်ကစား) တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်ကိုမှာသတင်းအချက်အလက်သုတေသနစာကြည့်တိုက်မှူးတစ်ဦး "ကွန်ပျူတာဦးနှောက်ထည့်သွင်းတွေနဲ့တာဝန်ပေးဆောင်ရွက် (Spencer Tracy နေဖြင့်ကစား) ကိုနည်းလမ်းများအင်ဂျင်နီယာ / ထိရောက်မှုကျွမ်းကျင်သူနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျရောက်ကျသော" Desk သတ်မှတ်မည် "ပြန် 1957 ရုပ်ရှင်မှထင် "ဟုအဆိုပါကွန်ယက်ကိုမှာသတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်။ အဆိုပါကွန်ပျူတာ AI အလူသားဘဝတွေကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပုံကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ (စကားမစပ်, က 2014 အတွက်, ပုပ်ခရမ်းချဉ်သီးကရှားပါး 100% အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်တစ်ဦးချစ်စရာကောင်း RomCom ဖြစ်ပါတယ်) ။ အဆိုပါဝေါဟာရကို "အတုထောက်လှမ်းရေး" ဟုသူက AI အပေါ်ပထမဦးဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာညီလာခံခေါ်ယူသည့်အခါ 1956 (ရုပ်ရှင်မတိုင်မှီတစ်နှစ်တစ်) အတွက်အသုံးပြုတဲ့သူ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်ဆရာယောဟနျဆက်မက်ကာသီရန်အသိအမှတ်ပြုသည်။
အနာဂတ်တွေ့ကိုအသုံးပြုသည်များအတွက်ပုံနှိပ်မီဒီယာ၌ရှိသကဲ့သို့, ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုလည်း tagged နှင့်ရည်ညွှန်းသည်ဖြစ်သောကြောင့်လက်မှာနောက်ကျောဒီကိစ္စကိုမှရယူခြင်း, Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စာကြည့်တိုက် applications များအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာနောက်တဖန်တွေ့ရှိရခံရဖို့ဘယ်တော့မှအချို့သော Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမှာသိုလှောင်မှု၏ကြီးမားသောအနက်ဆုံးသောတွင်းထဲမှာချန်ထား, တစ်ဦးကိုဗီဒီယို mis-tag ကိုရန်အလွန်လွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။
စက်အကြောင်းအရာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအပေါ် tag ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ခွင့်ပြု၏အလွန်သဘောသဘာဝကိုငါ့ယုံကြည်ချက်အတွက်၎င်း၏အရှုံးဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
5G ကကို bundle တစ်ဦးမီဒီယာအတွက်နှောင့်အယှက်, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ရိုးရာအကြောင်းအရာပေးပို့မော်ဒယ်များဖြစ်ကတိပြုနေစဉ် AI အများ၏သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်လမ်းမကယ်မလွှတ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 2019 NAB ပြရန် ကပိုက်ဆန်လျှော်အတွက် Ai နှင့်အတူဆောင်ခဲ့ 5G ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟုပြသပါလိမ့်မယ်။ တစျခုလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများကဤအံ့သြဖွယ်မြန်နှုန်းမြင့်နည်းပညာဖြင့် reshaped လိမ့်မည်။
အားလုံး NAB Show ကိုအစားကောင်းကြိုက်သူများ Calling: Las Vegas စားသောက်ဆိုင်များ! #NABShow @NABShow - ဧပြီလ 2, 2019
ဇာတ်လမ်းတွေကို The Power of - ဇန်နဝါရီလ 25, 2019
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit တီဗီနည်းပညာ	2019-01-05
ယခင်: audio အင်ဂျင်နီယာချုပ် (မရောနှော)